Dadka ku cusub dalka ee shaqo hela oo laga qiyaameeyo mushaharka ay qaataan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xafiiska shaqada Örebro. Foto: Magnus Norström/Sveriges Radio
Dadka ku cusub dalka ee shaqo hela oo laga qiyaameeyo mushaharka ay qaataan
La daabacay onsdag 27 december 2017 kl 10.42
Shirkadaha ka hela xafiiska shaqada ee arbetsförmedlingen kaalmo dhaqaale si ay u shaqaaleysiiyaan dadka shaqo doonka ah gaar ahaan kuwa mudada dheer aan shaqeyn ama dadka dalka ku cusub, ayaa lagu waramayaa in ay sammeeyaan is daba marin iyaga oo aan bixin mushaharka ay kula heshiiyaan shaqaalaha.
– Waa wax aan la aqbali kareyn. Waxaan qeyb ka nahay heshiiska dhex mara shaqo doonaha iyo shaqo bixiyaha kaasi oo ah in daka shaqeynaya ay helaan mushahar, waana xaquuqdooda in ay helaan mushaharka lagu heshiiyay. Waa sharuudaha aan ku bixino kaalmada kabida mushaharka ee shirkadaha shaqaaleysta dadka, ayay tiri Madelne Malkani oo ah isuduwe howl oo ka tirsan xafiiska shaqada qeybtiisa gobolka Örebro.
Xafiiska shaqada gobolka Örebro ayaa tan iyo ilaa iyo bishii Sibteembar ee sanadkan waxay dib u soo ceshadeen lacag deeq kaalmo mushahar oo ay hore u siiyeen shirkado taasi oo gaareysa toddobo milyan oo kronor. Madelene ayaa rumeysan in labo milyan oo kalana ay suuragal tahay in xafiiska soo dib ula soo laabto ka hor inta uu dhammaan sanadka.
Qiyaanada soo baxday ayaa ah mid salka ku heysa is daba marin in shirkadaha ku sammeeyaan lacagta kaalmada mushaharka ee ay ka helaan xafiiska shaqada taasi oo qeyb ah mushaharka qofka ay shaqaaleysiiyaan. Waxaa inta badan lagula kacaa dadka dalka ku cusub, kuwa mudada dheer shaqo la’aanta soo ahaa iyo dadka aan lixaadkooda dhammeystirneen ee shaqo la siiyo.
– Dabcan kuwa qiyaanadu saameyso waa dadka shaqaalaha ah. Qiyaanada ayaa noqon karta in aan la siin mushaharkii la gula heshiiyay. Shaqo bixiyaha waxaa laga yaabaa in uusan bixin cashuurta oo waxbaa ka qaldamaya cashuur celinta sanadlaha la sammeeyo taasina waxay wax u dhimeysaa lacagta hawlgabka ee kuwa shaqaalaha ah.
Qof si fudud uu dhammeystiran ayaa loo qiyaanayaa, ayay leedahay, säger Madelene Malkani.
Lacgta uu dalbaday in loo soo celiyo xafiiska shaqada ee guud ahaan dalka ayaa gaareysa sanadkan 238 milyan oo kronon. Waa sare u kac 20% kolka lala barbardhigo sanadkii hore.
– Waa lacag aad u badan oo loo isticmaali karo habab kale oo wabaagsan si dadka loo so geliyo suuqa shaqada ama loo weeciyo shaqo bixiyayaasha doonaya in ay helaan tamarta shaqo ee saxda ah ee ay la socoto awoodo xirfadeed e saxda ah, ayay ugu dambeyntii leedahay, Madelene Malkani.